Sfi. (waxaa laga soo gaabiyay, iswiidhishka loogu tala galay dadka qaxootiga ah) Waxbarashada dadka waaweyn | Skolverket nyanlända
Laga billaabo 16 sano
Iswiidhishka loogu tala galay ajnabiga (sfi) waxuu ku siinayaa aqoonta aasaasiga ah ee luqadda iswiidhishka. Waxaad baraneysaa luqadda iswiidhishka si aad wada xiriir maaalinle ah ugu sameeysid hadalka iyo qoraalka, bulshada iyo goobaha shaqadaba. Qofka aan baran karin ama aanan qori karin luqaddiisa hooyo waxaa jira fursad uu ku barto.
Si loo dhigot sfi waa in da'da qofka eey ahaataa 16 sano, laakiin ma jiraan wax xuduud ah waxii da' intaas ka weyn ah si aad wax loo barto.
Sidaan ayaa waxbarashada loo habeeyay
Waxbarashada waxaa loo qorsheeeyaa loona habeeyaa qaab ku habboon baahida qofka iyo hammiga uu tiirsanayo. Maadaama sfi loogu tala galay dad khibrado kala duwan leh, qaab nololeed kala duwanna leh, aqoon iyo hiigsi kala duwanna leh, waxaa jirta in dadka eey koorsooyinka kala duwan kala dhaqsi ku akhriyaan. Sidaas darteed ayeey koorsooyinka marar kala duwan u kala dhamaadaan dadka.
Ka arday ahaan waxuu qofku heystaa casharro 15 saacadood isbuucii. casharradu luqadda iswiidhishka ayeey ku baxxaan laakiin akhriska iyo qoridda luqadda hooyo ayeey ku baxaan ama luqad kale oo uu ardaygu si fiican u yaqaan. Sfi waxaa tusaale ahaan lala socodsiin karaa shaqo, tababar ama waxbashada dadka waaweyn ee degmada (komvux) ama waxbarasho khaas ah oo loogu tala galay dadka waaweynka (ee dhimirka la')
Waddooyinka waxbarasho iyo koorsooyin
Sfi waxuu leeyahay saddax wado oo waxbarasho (1, 2, 3). Jidka waxbarasho ee 1 dadka aan waxba ku akhrin karin waxbana ku qori karin luqaddiisa hooyo ama heysta waxbarasho aad u gaban, halka wadada waxbarasho ee 3 eey tahay mid loogu tala galay dadka waxbarashada caadeystay. Waddo kasta ee waxbarasho waxeey ka koobantahay koorsooyin badan.
Laga billaabo 1 julaay 2016 sfi waxuu qeyb ka noqon doonaa waxbarashada dadka waaweyn ee (komvux) waxbarashaduna waxeey noqoneeysaa mid loo sameeyay ineey ku habboonaato baahida shaqsiyeed, taasoo ka dhigan ineey wax iska bedeleyaan qaabka koorsada.
Sfi waxuu isticmaalaa natiijooyinka A-F sida kuwa laga isticmaalo dugsiyada hoose dhexe, sare iyo iskoolka dadka waaweyn. A ayaa ugu sarreeyso F na waa marka lagu dhaco. Koorso kasta markeey dhamaato ayaa lasoo dhajinayaa.
sfi:ga ku yaal Machadka dadka waweyn
Waxaa kaloo jira fursado oo uu qofka ku baran karo sfi asigoo ku sugan machadka waxbarashada ee dadka waaweyn beddelka sfi uu qabanqaabiyo maamulka degmeda. Haddii aad rabtid inaad wax ka baratid machadyada waxbarasho ee dadka waaweyn, kala xiriir maamulka degmadaada fursadaha jira.
Inaad warbixin dheeraada ogaatid?
La xiriir xafiiska waxbarashada dadka waaweyn/sfi ee degmadaada. Waxaa jira jiheeye xaga waxbarashada iyo xirfadaha oo kaa caawinaayo talosiin iyo warbixin. Macluumaadka lagala xiriiro waxeey ku jiraan degmada boggeeda internetka.